ने का सभापति: शशांकलाई अघि बढ्न दबाब | सिमान्तMarginal ने का सभापति: शशांकलाई अघि बढ्न दबाब – सिमान्तMarginal
Posted on2Mar 2016 19 Mar 2017 by Jesi for INCOMESCO
शशांकले सोमबार धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयताबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेपछि महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा सिद्धान्त र नीतिगत विषयमा समेत छलफल गरी त्यसका आधारमा मात्र उम्मेदवार घोषणा गरिनुपर्ने अडान केही नेताहरूले लिएका छन् ।
मंगलबार साँझ शशांक निवास महाराजगन्जमा महामन्त्री कृष्ण सिटौलाबाहेक संस्थापन पक्षका अन्य शीर्षस्थ नेताहरूबीच भएको बैठकमा आफूले उठाएको मुद्दाका साथ नेतृत्व पदमा दाबेदारी दिन शशांक कोइरालामाथि दबाब परेको छ, जब कि महामन्त्रीमा शशांक कोइराला उठ्ने टुंगो लागेको छ ।
वास्तवमा कागजमा लेखिने शब्दहरुमा शक्ति हुँदैन भन्ने ज्ञान हुँदाहुँदै पनि त्यसैकालागि मरिहत्ते गर्ने पाखण्डी परम्परा नेपालमा बसेको छ। आजसम्म आइपुग्दा राष्ट्रियता नराम्रोसंग स्खलित भएको छ। नेपाली जनताले बिकास बाहेक चाहेको केही होइन, तर उनिहरु ढाँटिने क्रम निरन्तर छ । बिकासका लागि राजनीतिको अभ्यास गरिनु पर्छ । राजनीतिका लागि समाजको व्याख्या र पहिचान गर्दा आर्थिक पक्ष केन्द्रमा रहनुपर्छ । जात, क्षत्रियता र भाषागत आधारमा गरिने पहिचान बिखण्डनकारी हुन ।
अहिले नेपाललाई चाहिएको शक्ति भनेको राष्ट्रिय शक्तिलाई बलियो पार्ने, बिकास र सुशासनलाइ ब्यवस्थित गर्ने हो । दलहरुको शक्ति, जनताको शक्ति र विदेशिको गुह्य स्वार्थबिच तालमेल मिलेको देखिन्न। त्यसैले यिनै शक्तिहरुको बिचबाट न्युनतम शक्ति आर्जन गरेर अघि बढनु पर्ने आवश्यकता छ। शक्ति आर्जन हुने ठाउँ भनेको जनता, सार्वभौम शक्ति र बलियो अर्थ तन्त्र हुन। तर जहाँ शक्तिको श्रोत निहित रहेको छ तिनैलाई कमजोर पर्दै फेरी शक्ति खोज्ने उल्टो काम नेपालमा भएको छ।
के शशांक कोइरालाले “ट्र्याक” बाहिर ओरालो लागेको नेपाली कांग्रेसलाई गति र दिशा दिन सक्लान ? तर दुर्भाग्य अहिले सहयोग गर्नेहरु नै केही नपाउने अवस्था आयो भने तिनै शशांकलाई न्वारनको बल निकालेर असहयोग गर्न पछि पर्दैनन । यी यावत सबै बिकृतिहरुको सामना गरेर ”कोइराला” को शाख फिर्ता गर्लान त डा शशांक कोइरालाले ! अहिलेलाई शुभकामना !
Previous Postनिजिकरण र गोजिकरण: खोतल्नु पर्ने तथ्यNext Postडोनाल्ड ट्रम्प बारे अमेरिकी मतदाताहरुलाइ निक्सको खुला पत्र !